Beyd ka mid ah Qaraamkii hodanka iyo curiskaba ahaa ee Feysal Cumar Mushteeg Qalinka: Boobe Yuusuf Ducaale. | Somaliland Today
← Apple Oo Ka Walaacsan Ammaanka Shirkadeeda
Xuska 30-Guurada Maalinta Shuhadada ee SNM →
Beyd ka mid ah Qaraamkii hodanka iyo curiskaba ahaa ee Feysal Cumar Mushteeg Qalinka: Boobe Yuusuf Ducaale.
Feysal Cumar Mushteeg
“Dhulyahow adna waan ku dhaarinayaa,
Ilaahii ku dhammeeyay ee ku dhisee,
Kuu kala dhigay dhoobo iyo ciid,
Dhexdaada ku beeray dhadhaabaha,
Jacaylka dhexdayada dhaqaaleeyoo,
Wixii na dhibaaya naga dhowr.”
Beyd ka mid ah Qaraamkii hodanka iyo curiskaba ahaa ee Feysal Cumar Mushteeg
Qalinka: Boobe Yuusuf Ducaale-cankaabo@hotmail.com-www.dharaaro.com
“Illeyn naftu way ku amartaayoo,
Hadday ibtilowdo kaa adag,”
Aynu ku sii soconno dareeerinta Qaraamkii dhadhanka iyo dareenkaba lahaa ee Feysal Cumar Mushteeg, waxaanu yidhi marar kale:
“Arligaan iska joogay eed-li’iyoo,
Aadmigu ii yaqaannay inan edeb lehe,
Ayaantaan ku arkaan alhuumooboo,
Ibtilo igu reebtay abada ah,”
Ayaamaha nabsigu ma eexdaanoo,
Immika anigaa ilmaynaayee,
Billood adna maalin oydaa,
Immisaan arkay inan asluub badanoo,
Haddana arki waayay awgaa,
Allaan kugu dhaariyee ubaxyahow,
Miyaanay Asli kaa udgoonayn,”
Bal ka warrama! Miyaanu Feysal Cumar Mushteeg dhaarin ubaxii. Waa halkii Maxamed Axmed (Kuluc) e’: “Waxaasaa jacayl ah.”
Intii Feysal Cumar Mushteeg uu ka qoray Busi ee ‘alifka’ ka bilaabmaysay, aan beydkan ku soo xidho:
“Intaan allifaayay ammaanteedaa,
Eedaankii arooryo ii baxay,”
Waa mar kale iyo gaaxdii Feysal Cumar Mushteeg. Waa qaybtii ‘Ba’leyda’ ahayd ee buyuuddii Qaraamka ee uu curiyay oo ilaa maanta nool. Bal aynu ku bilowno qaar ka mid ahaa kuwii uu ku muuneeyay jacaylkiisii dhabta ahaa ee beryahaa ku hawaarsaday ee uu raafba la rogi waayay. Iyo marka uu Subcis ku qaadayo. Nin maqlayna maqal, nimaan maqalla loo sawiri kari maayo. Bal Radio Hargeysa ayaynu ka raadin doonnaa in aynu Subcis ka hello, Ilaahayna ha inagu guuleeyo.
Bal hadda aan soo hormeeyo tuducyadii Qaraamka ahaa ee curintooda Feysal Cumar Mushteeg ku saxeexnaa, sida aan ka soo xigtay Maxamed Maxamuud Cige oo loo yaqaan Busi oo maansooyinkan ka qoray Feysal.
Waa maalmihii uu ka shaqayn jiray Burco, isaga oo ka hawl-geli jiray Xannaanadii Xoolaha, waxaanu ku bilaabay:
“Burcoo idil baa bidhaamaysoo,
Baroo idil baa barwaaqooboo,
‘Parkerow’ waxa timid ‘Blue Light,”
Illeyn nin waliba tuu caashaqaa waa u Canbaro Madow. Ma in uu roob da’ay oo la doogsaday ayaad moodaysaan? Xaasha! Kalgacalkiisii ayaa yimid, markaasaa dhulkii oo dhami barwaaqoobay. ‘Parker’ waa sarkaalkii Ingiriiska ahaa ee xafiiska Feysal ka hawl-galo madaxda ka ahaa.
Waxaan xusuustay ereyo uu Cabdillaahi Qarshe lahaa isaga oo isla xaaladdaa Feysal Cumar Mushteeg ku jiray oo Mandheera joogay. Kalgacalkiisii oo halkaa la joogtay ayuu isaguna hees ka tiriyay, waxaanu yidhi:
“Aqalkay ku jirtiyo intaa u dhow,
Mandheera oo dhami waa udgoon dhaha,”
Beydkani wuxu ku jiray hees uu Qarshe xaaladdaa ka tiriyay. Feysal Cumar Mushteeg oo qaadaya ayaan mar iyo laba ka maqlay.
Intaa hore wuxu Feysal Cumar Mushteeg ku kabay:
“Anigoon booqan bari u bixi maayoo,
Loo-baahde Ilaahay baa la baryaa,
‘Parkerow’ waxa timid ‘Blue Light’,”
Inta ka dib malaha Feysal Cumar Mushteeg xarafka ‘Ba’da’ ayuu jacaylkiisu jantay e’, waa kan Burco ka ambo-baxay ee hadda inala tegaya magaalada Boorame, waxaanu ku bilaabay ereyadiisii xadantada lahaa:
“Bustaankaan ka beeray Boorame,
Baaq-baaq baan is-lahaa bilow dhow,
Bartiikhi la guursay waa been,”
Wuxu intaas ku sii darayaa:
“Nafyahay Batalaale waad u bugtee,
Ku bogso badda mowjaddeedii,”
Bal beydkan u fiirsada. Wuxu ka mid yahay kuwa aynu Qaraamiga ugu maqal badan nahay, waxaanu yidhi:
“Sidii baxarasaaf ku yaalla bustaan,
Ayaad hadba ii bidhaantaa,”
Baxarasaafkaasi meel soke ayuu ahaaye, bal ka warrama marka aad kalgacalkaaga qayb jidhkaaga ka mid ah u hurto. Oo muxuu yidhi fannaankeenni Feysal Cumar Mushteeg:
“Beerkayga haddii badh loo jarayuu,
Bogsiinaayo kuma bakhayleen,”
Waxaasaa jacayl ah, illeyn wax walba jacayl laguma tilmaamo e’
Waa gaaxdii kalgacal ee Feysal Cumar Mushteeg, naxariistii Janno Ilaahay ha ka waraabiyo e’. Weli waxaynu dhex mushaaxaynnaa qaybtii uu ku lahaa Qaraamiga. Sidaas ayay inoogu hadhsan yihiin sheekooyinkiisii la yaabka lahaa.
Bal aynu eegno Qaraamkii iyo aqoontii markii la isku badhxay, wuxu Feysal Cumar Mushteeg ka soo tuujiyay. Malaha sugiba kari meysaan. Bal hadda dhareerka yar ceshada. Wuxu yidhi:
“Buyuuddaan ka baadhay Bukhaariga,
Burdahaan ku khatimay Ba’ iyo ‘Deel’”,